काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ३३४.५५ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ३६८ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित...
साधना लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, कति कायम भयो ?
काठमाण्डौ । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमीटेडको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बुधबार कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो । यो लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बोनस सेयर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न साधनाले साधारणसभा समेत आह्वान गरी बुक क्लोज...
काठमाण्डौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमीटेडको मूल्य समायोजन भएको छ । यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । बोनस सेयरपछिको मूल्य समायोजन भई प्रतिकित्ता ६५७४.१७ रुपैयाँ कायम भएको हो । यो कम्पनीको समायोजनअघिको अन्तिम बिक्री मूल्य ७८८९ रुपैयाँ प्रतिकित्ता रहेको थियो...
मूल्य समायोजनपछि सिटिजन्स बैंकको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर मूल्य समायोजन गर्दै सिजिन्स बैंकको प्रतिकित्ता ३५२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको सेयरभाउ ३९८ रुपैयाँ रहेको थियो। लाभांश र आगामी वार्षिक ...
मूल्य समायोजनपछि सानिमा माई हाइड्रोपावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजनका गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सानिमा माई हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ४०६.३६ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ४४७ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै सेयर...
डिप्रोक्स लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले डिप्रोक्स लघुवित्तको मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १३८८.४२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार डिप्रोक्सको १६६६.१० रुपैयाँ रहेको थियो। अब...
नबिल इक्विटी फन्ड र ब्यालेन्स्ड फन्ड–२ को मूल्य समायोजन, प्रतिइकाइ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको नगद प्रतिफलका लागि नबिल म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको इकाइ मूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) नबिल इक्विटी फन्ड र नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड–२ को इकाइमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिइकाइ नबिल इक्विटी फन्डको ११.५४ रुपैयाँ र नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड–२ को ११.०४...
मूल्य समायोजनपछि अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता ५२३ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता...
मूल्य समायोजनपछि रुरु जलविद्युतको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्से रुरु जलविद्युतको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १ हजार २०६ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १ हजार ३२७ रुपैयाा रहेको थियो। अब समायोजित...
मूल्य समायोजनपछि नेपाल ल्युब आयलको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) नेपाल ल्युब आयलको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २४३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता ३१६ रुपैयाँ रहेको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै नेपाल...
काठमाण्डौ । बोनस र हकप्रद सेयरका लागि एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस र हकप्रद सेयरका लागि एक्सेल डभेलपमेन्ट बैंकको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ७६२ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो बैंकको प्रतिकित्ता १ हजार ५३...
सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ र फन्ड–२ को मूल्य समायोजन, प्रतिइकाइ कति ?
काठमाण्डौ । सिटिजन्स म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ र सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–२ को इकाइमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) गत आर्थिक वर्षको प्रतिफलका लागि यी दुवै फन्डको इकाइमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिइकाइ फन्ड–१ को ११.२० रुपैयाँ र फन्ड–२ को ११.४९ रुपैयाा कायम...
मूल्य समायोजनपछि ङादी ग्रुप पावर र अपी पावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ङादी ग्रुप पावर र अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्से गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि यी दुवै कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ङादी पावरको ८०७.५ रुपैयाँ र अपी पावरको ४७८.७३ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार...
मूल्य समायोजनपछि सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको इकाइभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको नगद लाभांशका लागि सनराइज म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको इकाइमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) यो फन्डको इकाइमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिइकाइ १३.१३ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो फन्ड प्रतिइकाइ १८.१३ रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब...
मूल्य समायोजनपछि अरुण काबेली पावरको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको लाभांशका लागि अरुण काबेली पावर लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले अरुण काबेलीको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता ६८१ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७९७ रुपैयाँ पुगेको थियो। लाभांश र वार्षिक...